Wordpress ကို Host ပေါ်ဘယ်လိုတင်လဲ၊ — MYSTERY ZILLION
Wordpress ကို Host ပေါ်ဘယ်လိုတင်လဲ၊
April 2011 edited April 2011 in Wordpress
localhost မှာ install လုပ်တဲ့အတိုင်းပဲ .. FTP နဲ့ upload လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ ... <br><br>ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်း hosting တွေမှာ CMS script တွေ install လုပ်လို့ရတဲ့ service တွေပါတတ်ပါတယ် .. အဲလိုမျိုးပါရင်တော့ တခါတည်း install လုပ်လို့ရပါလိမ့်မယ် .. <br>
localhost ကနေ web host ပေါ်တင်ရင် phpmyadmin ကနေ sql file ထုတ်လိုက်။ အဲဒီ sql file ထဲမှာ http://localhost/wordpress ကို http://www.mydomain.com နဲ့ Find And Replace လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်။ ပြီးမှသာ web host က database ကို import လုပ်ပါ။ နောက်မို့ဆိုရင် file တွေ အကုန်တင်ပြီး wp-config.php မှာလည်း settting ပြင်ပြီးရင်တောင် localhost ကို သွားသွားခေါ်တာ ဖြစ်နေလိမ့်မယ်။ http://localhost/wordpress က ဥပမာ အနေနဲ့ ပြထားတာ။ ကိုယ့်ရဲ့ ပတ်လမ်းကြောင်းပေါ့။ mydomain.com ကလည်း ကိုယ့် domain ပေါ့။ wp-config.php မှ​ာ database config ပြင်ပေးရုံပဲ။
host ပေါ်တင်တာက firezilla လို third party ftp manager တွေနဲ့တင်လို့ရသလို hosting မှာ file manager တွေပါတက်တာရှိတယ်။ တချို့ file manager တွေကိုတော့ မြန်မာပြည်ကဘန်းထားလေ့ရှိတယ်။ တခါတလေကြရင်တော့ port ကိုပါပိတ်ထားပါတယ်။ proxy နဲ့ပါကျော်သုံးရပါတယ်။ မြန်မြန်ပြီးချင်တယ်ဆိုရင် one click installer တွေသုံးပြီးတင်ပါ။ ပြီးရင် wordpress importer plugin ကိုသွင်းပါ။ ပြီးရင် localhost က post တွေကို export ထုတ်လိုက်ပြီး hosting ပေါ်မှာ import လုပ်ပါ။ ဒီလိုဆိုရင်တော့ post တွေ page တွေရပါပြီ။ ကျန်တဲ့ plugin တွေကတော့ dashboard ထဲက install လုပ်တာက FTP နဲ့တင်တာထက်ပိုမြန်ပါတယ်။ <br>
<p>There doesn't seem to bea<code>wp-config.php</code> file. I need this before we can get started. Need more help? <a href="http://codex.wordpress.org/Editing_wp-config.php">We got it</a>. You can createa<code>wp-config.php</code> file throughaweb interface, but this doesn't work for all server setups. The safest way is to manually create the file.</p>
<p><a href="http://hanmyohtwe.comli.com/wp-admin/setup-config.php"; class="button">CreateaConfiguration File</a></p>
<p>CreateaConfiguration File ကို click တော့ error<br>
@hanmyohtw , please upload all the files. I didn't upload all the files of wordpress include wp-admin folder.